राति अबेरसम्म निन्द्रा नलागे के गर्ने ? – Sidhakuro
राति अबेरसम्म निन्द्रा नलागे के गर्ने ?
कतिपय मानिसलाई राति अबेरसम्म निद्रा लाग्दैन । त्यसपछि उनीहरूलाई बिहान उठ्न समस्या हुन्छ । यो अनिद्रा वा चिन्ता (तनाव) को कारण हो भनेर चिकित्सकहरू विश्वास गर्छन् । यद्यपी आजकल धेरै मानिसहरू राति सुत्दा सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलमा सक्रिय हुन्छन् जसका कारण उनीहरूलाई निद्रा लाग्दैन । हामी तपाईंलाई केही यस्ता टिप्स बताइरहेका छौं जसको मद्दतले राति चाँडै निन्द्रा लाग्नेछ ।
सुत्ने समय सेट गर्नुहोस् र मोबाइल अफ गर्नुहोस्
धेरैजसो मानिसहरू राति सुत्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूसँग सुत्ने समय निश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा निन्द्रा नपुग्दा मानिसहरू मोबाइल, गेम, च्याटिङ आदिमा व्यस्त हुन्छन्, जसका कारण दिमाग व्यस्त रहन्छ । यस समस्याबाट बच्नको लागि तपाईंले आफ्नो सुत्ने र उठ्ने समयहरू सेट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै १० बजे वा ११ बजे । यसपछि सुत्ने बेला हुनेबित्तिकै मोबाइलको स्वीच अफ गर्नुहोस् वा आफूबाट टाढा राख्नुहोस् । सुत्नमा ध्यान दिनुहोस् ।
दिमागमा आउने विचारहरू नोट गर्नुहोस्
यदि तपाईं राति अबेरसम्म सुत्न सक्नुहुन्न भने थोरै व्यायाम गर्नुहोस् । एउटा डायरी र कलम लिनुहोस् । तपाईंको दिमागमा आउने हरेक विचारलाई नोट गर्नुहोस् । केही समय पछि तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईंसँग कुनै विचार बाँकी छैन । त्यसपछि आफ्नो पूरा ध्यान निद्रामा लगाउनुहोस् । आँखा बन्द गरेर सुत्नुहोस् ।
गहिरो सास लिनुहोस्
यदि तपाईं सुत्न सक्नुहुन्न भने सुत्नुअघि एउटा काम गर्नुहोस् । सुत्नुअघि चिसो पानीले हात, खुट्टा, मुख धुनुहोस् । अब पानी पुछेर ओछ्यानमा जानुहोस् । शरीर फैलाएर सीधा सुत्नुहोस् । आँखा बन्द गर्नुहोस् र गहिरो सास लिनुहोस् । २०–२५ गहिरो सास लिएपछि तपाईं निदाउन थाल्नुहुन्छ । यस अवधिमा दिमागबाट सबै विचारहरू हटाउनुहोस् ।
हल्का संगीत सुन्नुहोस्
सुत्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको संगीत सुन्नु हो । यदि तपाईं राति अबेरसम्म सुत्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो इयरफोन खोल्नुहोस् र हल्का संगीत सुन्नुहोस् । क्लासिक संगीत सुन्न सकिन्छ । यसो गर्दा तपाईंलाई छिट्टै निद्रा लाग्नेछ ।
विद्यालयमा खाजाको पात्रो, नियमित हुन थाले विद्यार्थी
संवैधानिक निकायका मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
सहप्राध्यापकले नै उत्तरपुस्तिका केरमेट गरेपछि…
© 2022 Sidhakuro